‘शैली संवाद’ मा कवि घिमिरेको चर्चा
काठमाडौं– शैली थिएटर र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको ‘शैली संवाद’मा कवि माधवप्रसाद घिमिरेको कवित्व र व्यक्तित्वको चर्चा गरिएको छ । घिमिरेको १३औं पुण्य तिथिका दिन कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा गोविन्दराज भट्टराई, कृष्ण धरावासी, डा. नवराज लम्साल, टीका आत्रेय, सुदेश सत्याल वक्ताका रुपमा थिए । कवि महेश पौड्यालले कार्यक्रममा सहजीकरण गरेका थिए ।
कवि टीका आत्रेयले घिमिरेको ‘गौरी’ शोककाव्यबाट एक अंश पढेका थिए । कवि सुदेश सत्यालले ‘नव युवक’ र ‘कलमवीर’ शीर्षकका दुई कविता वाचन गरे ।
प्राडा. गोविन्दराज भट्टराईले घिमिलेलाई सम्झिँदै भने, ‘म २० सालमा काठमाडौं आएको थिएँ । एकेडेमीमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव थियो । त्यहाँ नेपाली साहित्यका महारथीहरु हुनुहुन्थ्यो। आँखीभौँले ढाकेको, कानमा ढपक्क रौँ आएका एक व्यक्तिसँग म निकै प्रभावित भएँ। उहाँको संगत गरे पछि मलाई कविता लेख्न मन लाग्यो। म बुरुकबुरुक उफ्रेको थिएँ। ६५ पेजको खण्डकाव्य लेखेर उहाँलाई भूमिका लेखाउन भेट्न गएँ । दुई दिनपछि आउन भन्नुभयो। म फेरि गएँ, उहाँले मेरो डायरी फिर्ता दिँदै भन्नुभयो– राम्रो लेखेको रहेछौ, एकेडेमी मा दर्ता गराऊ ।’
भट्टराईले घिमिरेबाट पाएको प्रेरणाले नै आफ्नो रचना एकेडेमीमा दर्ता गरेको बताए ।
त्यस्तै, साहित्यकार कृष्ण धरावासीले कवि घिमिरेसँग २०४५ सालमा भेट भएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँ सय वर्षसम्म बाच्नुभयो। उहाँका चेतना, विचार अहिलेको पुस्ताले स्वीकार गर्न सक्नु नै उहाँ कति शक्तिशाली विचारक र चिन्तक हुनुहुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
कवि एवं सञ्चारकर्मी डा. नवराज लम्सालले भने, ‘केही समयअघि गीति एल्बम विमोचन गर्दा उहाँकै सामुन्ने गीतका बारेमा सानो टिप्पणी गरेको थिएँ । केही साथीहरुले त्यसो भन्नु गलत भएको जिकिर गरे । पछि उहाँले नै मलाई भन्नुभो, नवराज बाबू तिम्ले ठीक भन्यौ। गीतको सूत्र नै त्यही हो ।’
शैलीका अध्यक्ष एवं निर्देशक नवराज बुढाथोकीका अनुसार शैली संवादका अन्य १५ वटा भागमा जातीय, लैंगिक, भौगोलिक विधा र कार्यक्षेत्रलाई समावेश गरिनेछ ।
शैलीका नारायण न्यौपानेको परिकल्पना र निर्देशनमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको आगमी भागमा चलचित्र निर्देशक दीपेन्द्र लामा, साहित्यकार महेश पौड्याल, बालबालिका अधिकारकर्मी यादवदेवी बस्‍नेत, शास्त्रीय गायक श्री केसी, विश्लेषक एवं कवि आहुति, समाजसेवी रोहिणी भट्टराई, शास्त्रीय नृत्यांगना सुजाता बराल, बालसाहित्यकार अनुराधा र कवि एवं सञ्चारकर्मी धीरेन्द्र प्रेमर्षी रहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १६, २०७७ ०१:१४